विश्वकपमा सार्वजनिक गरिएका तीन कुरा | Home
विश्वकपमा सार्वजनिक गरिएका तीन कुरा
Posted on May 26, 2010 by Yonepal	विश्वकप फुटबलमा प्रयोग गरिने फुटबल, मैदान र प्रदान गरिने ट्रफि सार्वजनिक गरिएको छ। विश्वकै सबैभन्दा प्रतिष्ठिक मानिने विश्वकप फुटबल सबैको लागि चासो र महत्वको विषय हुन्छ। सार्वजनिक गरिएका तीन कुराहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
A world cup soccer ball dummy is on display duringapress conference in the German sport goods company Adidas in Herzogenaurach, southern Germany, on Tuesday, April 20, 2010. Adidas presented the ball, which was especially produced to be played in the final of the World Cup in Johannesburg, South Africa, on July 11, 2010. AP
Arial view of the Soccer City withaseating capacity of 94,700 in Johannesburg, South Africa, Sunday Oct. 18, 2009. AP
The world cup trophy is pictured in front ofaFIFA logo prior to the European play-off draw for the 2010 Soccer World Cup in South Africa in Zurich, Switzerland, Monday Oct. 19, 2009. AP
विश्वकप फुटबलका लागि सबै राष्ट्रको टोली पूर्ण रुपमा तयार
विश्वकप फुटवल प्रतियोगीताका लागि सहभागी सवै राष्ट्रले आ-आफ्नो टोली पुर्ण रुपमा तयार भएको वताएका छन् । प्रतियोगीतमा नया रणनीतीका साथ आ-आफ्नो फुटवल टोलीलाइ मैदान उत्रार्ने सहभागी ३२ मुलुकका प्रशिक्षकहरुको दावी छ । जुन ११ वाट फिफा विश्वकप फुटवल दक्षिण अफ्रीकामा सुरु हुदैछ ।
विश्वमै फुटवलको जादु देखाउदै आएको व्राजिलले यसपटक पनि अघिल्लो प्रर्दशनलाइ यथावत राख्ने वताउदै आएको छ । उता आफ्नो देशले नै उपाधि लैजाने ठोकुवा अर्जेन्टीनी फुटवल स्टार मेसीको छ । यसपटक अर्जेन्टीनाको समुहमा अफ्रीकी टोली नाइजेरीया रहेको छ । जुन टोली लगातार अर्जेन्टीनाको सिकार हुदै आएको छ तर घरेलु दर्शको सपोर्ट पाउने अफि्रकी टोली नाइजेरीया अघिल्लो प्रदर्शनको वदला पहिलो खेलवाट नै लिन चाहान्छ ।
जर्मन , पोर्चुगल र इङगल्याण्डको प्रदर्शनलाइ पनि यसटपटकको विश्वकप फुटवलमा अर्थपुर्ण रुपमा हेरीएको छ । यता एशियाली महारथि जापान र कोरीयाको सहभागीतामा सन्तुष्टी महशुस गरीरहेका एशियाली समर्थकहरु पनि यी दुइ राष्टको प्रर्दशन शसक्त होस् भन्ने आशामा छन् । प्रतियोगीताको तयारी पुरा भएको आयोजक देश दक्षीण अफि्रकाले वताएको छ । प्रतियोगीताका लागी विक्रीमा राखीएका ३० लाख टिकेट पनि लगभग विक्री भैसकेको फिफाले जनाएको छ । अव प्रतियोगीता सुरु हुन मात्र १६ दिन वाकी छ । Rate this:Share this:RedditLike this:Like Loading...
Filed under: SPORTS Tagged: | विश्वकप	« हा, हा, हा, हा कस्तो दामी फोटोहरु दक्षिण अफ्रीकी खेलाडीले गरे १९ औं विश्वकपको पहिलो गोल »